Ma Ihi Difaaca Labaad Ee Aduunka Ugu Xun, Aniga Oo Aan Xataa Ciyaarin Ayaa Guuldarada Laygu Eedeeyaa-Shkodran Mustafi Oo Si Calool Xumo Ah Uga Cawday Jamaahirtiisa Arsenal. - Gool24.Net
Ma Ihi Difaaca Labaad Ee Aduunka Ugu Xun, Aniga Oo Aan Xataa Ciyaarin Ayaa Guuldarada Laygu Eedeeyaa-Shkodran Mustafi Oo Si Calool Xumo Ah Uga Cawday Jamaahirtiisa Arsenal.
Difaaca kooxda Arsenal ee Shkodran Mustafi ayaa cabadho aad u wayn ka muujiyay qaabka xun ee ay ula dhaqmaan jamaahiirta kooxdiisa Gunners wuxuuna ku dooday in ay xataa gaadheen in ay wax walba oo kooxda ka qaldama isaga ku eedeeyaan.
Shkodran Mustafi ayaa bartilmaameed u noqday taageerayaasha kooxdiisa kadib markii uu qaladaad xun sameeyay dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay iyada oo baraha bulshada si xun loogu karbaashay.
Laakiin xidiga reer Germany ayaa tilmaamay in uu jiray waqti uu tababare Unai Emery isaga oo safay isaga oo aan saddex todobaad tababar qaadan isla markaana waqtigii uu qaladaadka sameeyay ay eedayn aan xad lahayn kaga timid.
Shkodran Mustafi ayaa ku dooday in aanu ahayn difaaca labaad ee aduunka ugu xun balse waxaa warbaahinta si xun u taabatay qaabka uu uga ashkatooday jamaahiirta Gunners uu ku tilmaamay kuwo caadaystay in ay isaga wax walba ku eedeeyaan xataa marka aanu ciyaarayn.
Shkodran Mustafi ayaa waraysi siiyay wargayska dalkiisa Germany ee Der Spiegel wuxuuna kaga hadlay arimo la xidhiidha xaalada xun ee uu kala kulmayo jamaahiirta kooxdiisa Arsenal.
Shkodran Mustafi ayaa yidhi: “Anigu ma ihi difaaca labaad ee aduunka ugu xun. Dhawaan waxaan sameeyay qaladaad kuwaas oo abuuray dhibaato aanan waligay soo marin ka hor”.
Intaas kadib Shkodran Mustafi ayaa soo bandhigay waqtigii uu Unai Emery isaga soo safay isaga oo aan saddex usbuuc tababar samayn wuxuuna yidhi: “Waxaan dhaawac ku maqnaa saddex todobaad, waxaana qasab igu noqotay in aan ciyaaro tababar la’aan, sababtoo ah tababaraha ayaa ii baahday”.
“Waqtigii nasashada waxaanu ku hoosaynay 4-1, waxaana i soo gaadhay dhaawac kale, kadib ciyaarta waxaan eedayn badan kala kulmay taageerayaasha ee baraha bulshada iyo maqaalada warbaahinta” ayuu Mustafi hadalkiisa raaciyay.
Shkodran Mustafi oo hadalkiisa sii wata aya yidhi: “Waan qaadan karaa eedaynta laakiin qaarkeed waa sabab la’aan waxayna iga dhigtay bartilmaameedka wax walba oo qaldama. Waxay gaadhay heer laygu eedeeyo kulamada aanan xataa anigu ciyaarin”.
Cabashada Mustafi ayaa muujinaysa ilaa xad heerka uu dhibsaday eedaynta aan kala joogsiga lahayn ee uu kala soo kulmayay jamaahiirta kooxdiisa Arsenal.